Sababta ay isku casishay Madaxii Wada-xaajoodka Ganacsiga ee Soomaaliya ee Geneva?. - Awdinle Online
Sababta ay isku casishay Madaxii Wada-xaajoodka Ganacsiga ee Soomaaliya ee Geneva?.
Madaxii Wada-xaajoodka Ganacsi ee Soomaaliya u joogay Ururka Ganacsiga Adduunka ee WTO oo Xaruntiisa Dhexe ku taallo magaalladda Geneva ee dalka Switzerland, Maryan Xasan ayaa ku dhawaaqday inay iska casishay Xilkaasi.
Qoraal ay soo dhigtay Barteeda Twitter-ka ayey ku sheegtay in ay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xalay u gudbisay Is-casilaadeeda, waxayna cabasho ka muujisay Saraakiil sarsare oo ka tirsan DFS oo ay xustay in ay iyada ku hayeenDibindaabyo iyo inay si joogto ah u wiiqaan Waxqabadkeeda.
Waxay Nasiib-darro ku tilmaamtay inay Saraakiil Sare isbuucii hore baabi’iyeen waxqabadkii iyo Horumaradii ay samaysay, taasi oo horseeday Qalalaase Diplomaasiyadeed.
Qoraalkeeda waxay kaloo ku xustay inaysan ahayn Siyaasi, balse ay tahay Xirfadle, iyadoo saluug xooggan ka muujisay qaabkii ay Saraakiishaasi kula dhaqmeen, waa sida ay hadalka u dhigtay.
Madaxii Wada-xaajoodka Ganacsi ee Somalia u joogay Ururka Ganacsiga Adduunka ee WTO, Maryan Xasan waxay u mahad celisay Saaxiibada Taageera ee DFS iyo Villa Somalia.
Waxay kaloo u mahad celisay Dowladii hore ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iyagu markii ugu horeysay Codsiga Soomaaliya ee xubinimada Ururka Ganacsiga Adduunka ee World Trade Organisation (WTO) iyo inaan shaqadii u horeysay ku bilaabo La-taliyaha Guud ee dhanka Sharciga.
Ma aysan carabaabin Saraakiisha ay dartooda isaga casishay Xilkaasi, balse, waxay hoosta ka xariiqday inay Sharaf weyn u ahayd in ay Soomaaliya ku matasho Xilkaasi muddadii shanta sano ahayd ee ay joogtay Xarunta Dhexe ee Ururka Ganacsiga Adduunka ee WTO.
Ururkaasi oo la asaasay sanadkii 1994-tii, waxaa xubno ka ah 123 Waddan, iyadoo ay Soomaaliya codsatay Xubinnimada Ururkaasi bishii December ee sanadkii 2015-tii, balse Ururka WTO waxay magacaabeen Guddiga dib-u-eegista Codsiga Somalia bishii December ee sanadkii 2016-kii.
Previous articleFaaf faahin ka soo baxaysa Qarax lala eegtay dad shacab ah
Next articleWasiirka Amniga Hirshabelle oo Sheegay in AJaanibta Shabaab ay ka buuxaan deeganadooda.